“Opération Kidnapping” : Rava ny tambazotran-jiolahy -
AccueilSongandina“Opération Kidnapping” : Rava ny tambazotran-jiolahy
“Opération Kidnapping” : Rava ny tambazotran-jiolahy
Hatramin’ny nitsanganan’ny “cellule mixte” amin’ny resaka kidnapping, izay ivondronan’ny polisy sy ny zandary dia olona 39 ireo mpaka an-keriny efa voasambotra, raha ny tarehimarika avy eny anivon’ny zandarimariam-pirenena. Ireo teratany karana avokoa no nitondra faisana tamin’izany, ary vola be no takian’ireo jiolahy ho tambin’ny famotsorana azy ireo.
Ny volana oktobra 2017 no natsangana ity atao hoe “cellule mixte d’enquête anti-kidnapping” ity, izay mifantoka tanteraka amin’ny fandravana ireo tambazotran-jiolahy. Araka izany dia jiolahy miisa 39 no efa vita famotorana, ary naiditra am-ponja noho ny fandraisana anjara tamin’izany fakana an-keriny teratany karana izany, izay niseho nandritry ny volana maro teto an-drenivohitra. Anisan’izany ny lehilahy iray azo sambo-belona teny Anosivavaka Ambohimanarina, nandritry ny hetsika nataon’ny polisy sy ny zandary mivondrona ao amin’ny sampana SAG-UIR-USI sy ny GSIS, ny harivan’ny alakamisy lasa teo. Roa no maty ary iray no voasambotra, raha toa ka mbola tafaporitsaka tao anatin’ny fifampitifirana ny roa namany. Sarona nandritra izany, tao anatin’ny fiaran’ireo maty voatifitra tamin’io fotoana io ny ireo fitaovam-piadiana mahery vaika toa ny Kalachnikov roa, PA Makarov iray, PATT iray, ary Grenades Defensives roa sy Offensive iray miaraka chargeurs ary bala maro be. Ankoatra ireo fitaovam-piadiana, dia mbola nahitana fanamiana mpitandro filaminana iray tao anaty sakosy nentin’izy ireo, finday miisa dimy miaraka amin’ny “puce”.
Lehilahy iray izany no mbola voasambotra ary mitohy ny fikarohana. Ny famotorana azy no nilazany fa isan’ny nitazona ilay teratany karana vavy Sabera Vasram, izay nisy naka an-keriny teny Ivandry, ny volana jolay lasa teo. Etsy andanin’izay, mbola hita tao amin’ny trano fonenany ny fiara iray nanaovana ny fakana an-keriny rehefa natao ny fisavana. Toa ny efa fahita dia mampiasa fiarakodia avo lenta ireo jiolahy, ary mifindra fiara inefatra mandritry ny fifanenjehana. Miova toraka izany ihany koa ny takelaky ny fiara, raha ny nambaran’ny kolonely Boto Estelin “Direction de la police Judiciaire” (DPJ) eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, tao anatin’ny valandresaka nifanaovana tamin’ny mpanao gazety tetsy amin’ny toby Ratsimandrava.
Tsy olon-tsotra ireo mpaka an-keriny rehefa zohina ny paikady hanatanterahan’izy ireo ny asa fakana an-keriny ireo teratany karana eto an-drenivohitra. Toa ny mijery horonantsary mihitsy ireo sendran’izany fakàna an-keriny ankalamanjana izany, raha tsy hiresaka afa-tsy ny tetsy Ivandry, ny niseho tamin’i Yanish Ismael teny Ilafy teny am-pandevenana, … Manamarina izany ihany koa ireo fitaovam-piadiana mahery vaika hita eny amin’ireo jiolahy, ary tamin’ity fikasana haka an-keriny teratany Indopakistanais teny Anosivavaka afakomaly ity. Avy aiza tokoa no niavin’ireo basy ireo, izay fitaovam-piadiana tokony an’ny mpitandro filaminana ihany. Andrasana aorian’ny famotorana ny valin’izany?